Ịdebe Kọmputa Gị Mgbe Nchebe Dị Ukwuu Dịrị
Ma eleghị anya, kọmputa gị nwetara hacked ma ọ bụ ma eleghị anya ị pịa ụfọdụ mkparị malware njikọ site na ndudue ọ slipped gara aga gị oge ochie mgbochi malware. Ihe ọ bụla ikpe nwere ike ịbụ, ihe jọgburu onwe ya mere na kọmpụta gị ma ị bịara ghọta na ị ga-amalite ịkụcha, nke pụtara na ị ga-ehichapụ ma bipụtagharịa sistemụ arụmọrụ gị, ngwa gị niile, na data gi onwe gi.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye na-atụ anya ịmalite kpamkpam, ọ nwere ụfọdụ uru. Ọ nwere ike inye gị nnukwu mmelite ebe ọ bụ na ị ga-etinye usoro kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ gị. Ị ga-emechi anya ma kpochapụ ụdị ọ bụla nke faịlụ nwa oge nke nwere ike ịmelata usoro gị.
Ịmalite na-enyekwa gị ohere iji weghachite usoro gị, nke ahụ bụ ihe isiokwu a gbasara. Anyị ga-agafe akụkụ ọ bụla nke usoro na-ehichapụ ma gbanyegharịa ma gbalịa hụ na ebe ọ bụla i nwere ike, ị gbakwunye nchedo. Ya mere ka anyi malite:
Tupu ị ehichapụ ma bubatagharịa kọmputa gị, ịkwesịrị ime ihe ole na ole na mbụ, ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịbụ nke ọrụ karịa ogologo oge ị chọrọ. Ka anyị mee ihe ole na ole ị kwesịrị ime ugbu a nke ga - enyere gị aka izere mmejọ ndị na - abaghị uru mgbe e mesịrị na usoro ahụ.
Chịkọta Akụrụngwa Software gị na Ihe Ngwaahịa
Tupu ị kpochapụ draịvụ ike gị iji kwadebe maka mmalite mmalite site na nchaghachi, ị ga-achọ ijide n'aka na ịnwe diski sistemụ mbụ gị wee bịa na kọmputa gị. Ụfọdụ kọmputa adịghị abịa na diski ma bịa na nkwado ndabere dị na nkewa dịpụrụ iche nke draịvụ ike gị. Lelee akwụkwọ ndị weere na kọmpụta gị iji jide n'aka na ị maara otu esi enweta mgbasa ozi ma ọ bụ mepụta diski wụnye.
O yikarịrị ka ị ga-achọ isi ngwaahịa maka sistemụ arụmọrụ gị. Mgbe ụfọdụ, igodo a dị na ihe nkwụnye na ngwa nke kọmputa gị ma ọ bụ na ọ nwere ike ịnwe na kaadị na akwụkwọ gị.
Ndabere Ihe Ị Pụrụ Ị GA-EBE Ị Kpochapụ Ugwu gị ma gosipụta na I nwere faịlụ gị
O doro anya na ịchọrọ ịzọpụta data ọ bụla i nwere ike tupu ị kpochapụ ụgbọala gị. Weghachite faịlụ data gị onwe gị na mgbasa ozi nwere ike iwepụ (dịka CD, DVD, ma ọ bụ Flash mbanye). Tupu iwere usoro mgbasa ozi a na kọmputa ọ bụla, jide n'aka na nkọwa kọmputa antimalware na-adị ruo ụbọchị nakwa na a na-emejuputa usoro mgbasa ozi zuru ezu na mgbasa ozi tupu e depụta faịlụ ọ bụla n'ebe ọ bụla ọzọ.
Chọpụta na mgbasa ozi ị jiri maka ndabere gị nwere faịlụ data onwe gị na-enweghị malware ma ọ bụrụ na ịga n'ihu.
Kpochapụ Ike Dịrị Ike gị
Mgbe ị kwadoro nkwado ndabere gị ma chọta ihe nkesa gị na ikikere gị, oge eruola ka ị ghara ihichapụ draịvụ ike gị. Maka ntụziaka ụfọdụ na usoro a, lelee isiokwu anyị: Wepụ ma ọ bụ kpochapụ ngwa ngwa gị tupu mkpofu (mana doro anya, gbanyụọ ihe mkpofu). Tụkwasị na nke a, a bụ ndepụta nke ọtụtụ ngwongwo disk na-arụ ọrụ.
Tụlee Iji Mpempe akwụkwọ Malware na-anọghị aka iji hụ na ụgbọala ahụ bụ Malware n'efu
Ọ bụrụ na ị na-atụtụ ụjọ (dị ka m) ma na-echegbu onwe gị na ọbụna mgbe ị kpochapụrụ ụgbọala gị ka malware nwere ike ịchekwa na draịvụ ike gị, ị nwere ike ibugo ihe nyocha ọhụụ nke Malline iji chọpụta maka nsogbu ọ bụla nwere ike ịchebe ebe gị na ụgbọala gị. Eleghị anya ị gaghị achọta ihe ọ bụla ma ị nweghị ike ịkpachara anya, ya mere ị gaghị enye ya nlele ikpeazụ.
Chọpụta na ị nwere akwukwo kachasị ọhụrụ nke sistemụ gị
Ọ bụrụ na ị na-ebugharị sistemụ arụmọrụ gị site na disk nke weere na kọmputa gị, o doro anya na ọ ga-eweghachite gị na ọkwa nhazi mbụ karịa ihe dị ugbu a. Ọ bụrụ na o kwere omume, budata nsonaazụ kachasị ọhụrụ nke wụnye diski site na onye nrụpụta kọmputa gị ma ọ bụ site n'aka onye os. Nke a ga - ọ bụghị naanị ịchekwaa gị oge nkedo oge, ọ ga-ebutekwa na ịwụnye nhazi.
Tinye Osisi gị site na Media Trust ma ọ bụ Isi Iyi
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị ịwụnye diski, ị nwere ike ịnwa ị budata otu site na Ịntanetị ma ọ bụ zụta "obere ego" ebe. Zere ibudata disks arụmọrụ site na ebe ọ bụla ma e wezụga ụlọ ọrụ os Onye os. Ụfọdụ "ọnụ ala dị ala" nwere ike ịnwụ ma nwee ike ibute nje.
Jide na-echekwa ihe echekwara ma ọ bụ ibudata ozugbo site n'aka os.
Kwado Nche Nchebe Mgbe Echichi
Ozugbo ị malitere usoro nhazi nke sistemụ arụmọrụ gị, a ga-ajụ gị ọtụtụ ajụjụ n'oge usoro ntọala. Ọnwụnwa ahụ bụ ịhọrọ ọnyà niile, mana nke a nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kachasị mma maka nchebe na nzuzo.
Nyochaa nke ọ bụla n'ime nchedo ị na-enye ma chee na ị ga-ahọrọ maka nhọrọ kachasị ike ị ga-ekwe omume. Ị nwekwara ike ịhọrọ Nchichapụ Disk zuru ezu ma ọ bụrụ na ọ dị dị ka nhọrọ n'oge setup. Maka ama ndi ozo gbasara esi eziputa ugbo gi na ihe mere i ji choo, lelee isiokwu anyi: Otu esi eziputa faịlụ gi na ihe mere i kwesiri iji
Wụnye Ihe Njiri Nchekwa Os
Ozugbo arụ ọrụ arụmọrụ gị, ihe mbụ i kwesịrị ime bụ jide n'aka na ị ga-ebudata ụdị nke kachasị dị ugbu a. Ọtụtụ sistemụ arụmọrụ nwere ngwá ọrụ mgbochi akpaka nke ga-aga na saịtị onye os na-arụ ọrụ ma budata ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ, ọkwọ ụgbọala, na mmelite nche dịnụ.
Usoro a nwere ike were ọtụtụ awa iji wuchaa ma nwee ike ịme ọtụtụ ugboro dị ka ụfọdụ patches dabere na ihe ndị ọzọ na-enweghị ike itinye ya n'enweghị ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ ugbu a. Tinyegharịa usoro ahụ ruo mgbe atụmatụ njirimara nke Sistem na-akọ na ọ bụ kpamkpam na-adị ugbu a nakwa na ọ dịghị ihe nlele, ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ mmelite ndị ọzọ dị.
Wụnye Antivirus / Antimalware isi
Ozugbo i nwetara os osuru gị ma kwadoro ya, ntinye gị ọzọ ga-abụ ngwọta antivirus / antimalware. Jide n'aka na ị ga-ahọrọ onye a ma ama nke ọma site na ebe nrụọrụ weebụ na kọmputa. Ịchọta nyocha nke ị nụtụbeghị ma ọ bụ na ịchọta site na njikọ na igbe mgbapụta dị ize ndụ n'ihi na ọ nwere ike ịbụ antivirus adịgboroja ma ọ bụ Scareware , ma ọ bụ ọbụna njọ, ọ nwere ike ịbụ malware n'onwe ya.
Ozugbo i buliri isi antivirus / antimalware software gị, jide n'aka na ị debe ya ka ọ na-apụ na melite onwe ya ma gbanwee nchedo ya oge niile (ọ bụrụ na ọ dị).
Wụnye Nyocha Nyocha nke Abụọ
Naanị n'ihi na ị nwere software antimalware arụnyere na emelite apụtaghị na ị na-enwe nchebe pụọ na malware niile. Mgbe ụfọdụ, malware nwere ike ịjụ gị isi nyocha antimalware gị ma mee ka ụzọ gị banye na usoro gị na-enweghị gị ma ọ bụ antimalware ị maara banyere ya.
Maka nke a, ịnwere ike ịchọrọ ịwụnye ihe a maara dị ka Nyocha nke Malware nke abụọ. A haziri scanners ndị a ka ha ghara itinye aka na nyocha nke isi gị ma wuo ha ka ha bụrụ ihe nchedo nke abụọ ka ọ bụrụ na ihe na-agafe ihe nyocha gị, nyocha nke abụọ ga-atụ anya ya.
Ufodu ihe omuma nke ndi mmadu mara nke oma. SurfRight si HitmanPro na Malwarebytes Anti-malware. Maka ihe ndị ọzọ mere ị ga - eji chọọ Nyocha Ọhụụ nke abụọ , lelee isiokwu anyị: Gịnị mere I Ji Kwesịrị Ịchọpụta Nyocha Ọhụụ nke Abụọ
Wụnye Ngwá Ọrụ nke Ngwaọrụ Gị niile na Ihe Nchebe Ha
Ozugbo ị nwetara antivirus / antimalware ọnọdụ a na-elekọta, ọ bụ oge ịmalite reinstalling niile nke ngwa gị. Ọzọ, dịka na sistemụ arụmọrụ, ị ga-achọ iburu ngwa ngwa kachasị dị ugbu a nke ngwa gị na nkwụnye ins. Ọ bụrụ na ngwa nwere akụrụngwa nke onwe ya, jide n'aka na ị gbanwee ya.
Jide n'aka na Nchọgharị Ịntanetị na-emechi ma chekwaa, nakwa na ha na-echekwa nchebe ha ma na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi (njedebe-blockers, atụmatụ nzuzo, wdg).
Nyochaa data ndabere gị tupu i tinye ya na usoro gị
Tupu i bulie data nkeonwe gị site na mgbasa ozi nke nwere ike iwepu ya, kpoo ya maka malware tupu i depụtaghachi ya na kọmputa gị. Ị ga-achọ ijide n'aka na antimalware nwere ezigbo ọrụ "ọrụ" na-arụ ọrụ maka usoro a ma debe usoro mgbasa ozi "zuru ezu" ma ọ bụ "miri" nke media mgbasa ozi.
Dezie usoro osume na ngwa ngwa
Ọtụtụ usoro eji arụ ọrụ ga-ahapụ gị ka ịtọ oge iji rụọ ọrụ melite, tụlee itinye nke a n'oge ị naghị arụsi ọrụ ike na kọmputa gị, ma ọ bụghị na ị nwere ike ịda mbà ma gbanye ya ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ị kwụsị na mgbe ahụ gị usoro agaghị enweta akara na nchedo nchebe ịchọrọ n'ọdịnihu.
Weghachite System gị ma Mee Ntọala Nkwado
Ozugbo i nwetara ihe niile zuru okè na ụzọ ị masịrị ya, ị ga-arụ ọrụ zuru ezu nke usoro gị. Ngwá ọrụ gị nwere ike ịnwe ngwá ọrụ arụpụtara iji mezuo nke a ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ maka iji ngwaọrụ ndabere ndabere nke igwe na ngwa nchekwa ndabere mpaghara. Na-agụ isiokwu anyị na The Do's and Don'ts of Home PC backups for some tips on this process.
Don & # 39; T Naanị & # 34; Tọọ ya ma Chefuo Ya & # 34;
Naanị n'ihi na ị setịpụwo njirimara ntọala gị na "ON" apụtaghị na ha ga-arụ ọrụ dịka ha kwesiri. Ị ga-elele oge elele ma ọ bụrụ na melite ọrụ na-arụ ọrụ dịka eburu ma chọpụta na ọkwọ ụgbọala niile, njiri, na mmelite dị ugbu a. Ọzọkwa, nyochaa antimalware scanners iji hụ na ha nwere mmelite kachasị ọhụrụ dị ka nke a.
Iji 'Run As' na Windows
Otu esi achọta Ngwaọrụ Bluetooth efu
Ngwa Nchebe Nchekwa maka ndị nne na nna
Bụrụ Onye Ọhụụ Ụgha nke Ndị Mmadụ na Ọzụzụ FACE
Usoro Ntuziaka: Obere Paswọdu oge
Otu esi hazie Windows XP Firewall
Nyochaa: Ọrụ Nlekọta Nlekota oru Alarm.com
Gịnị Mere Ọbụna Na-agba mbọ Ịnọ Onwe Gị n'Ịntanet?
The Top 10 Internet na Email Scams
Jiri os X Combo Updates iji dozie Nsogbu nrụnye
Uzo esi emegharia Okpokoro Desktoosio Okpomodu
Otu esi eme ka amara na ọnụ ala na Galaxy Tab gị
Wizard Data Recovery Wizard v12.0
Kedu Otu Okpomume Ndabere n'Intanet Si Kpoo?
Ntuziaka ekwentị YouTube
Ntanetị echekwara Chọọ nkuzi
Ngwa Dijitalụ Dijitalụ Di elu maka ndi na-ese foto
Olee otú iji gbalịa Lubuntu 16.04 Iji Windows 10 Na 6 Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Kedu ụlọ Google? Gịnịkwa bụ Max na Obere?
Na-arụ ọrụ na-agbanye na Mmepụta Ihe
Kedu Ihe Na-agụ-Naanị Njikwa?
Etu esi tinye edemede na iPhone keyboard
Ihe 8 Ngwongwo egwu kachasị mma nke asatọ kacha mma ịzụta na 2018
Weghachite Outlook Mail Archived Site na Diski
Banyere Buzzdock Mgbasa ozi esighi na otu esi ewepụ ha
Otu esi eme Windows XP rụkwaa Wụnye
Ezigbo Earbuds Ikuku nke 7 kachasị mma ịzụta na 2018
Nbudata ihuenyo Mac site na iji akwukwo ozo achọta
7 Free GIF Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ maka Gbanwee vidio n'ime foto ndị anwụrụ
Ụzọ ise iji Bluetooth na ụgbọ ala gị